ဘလော့အပိုင်း - မော်ဒယ်လ်သင်ခန်းစာများ၊ သင်ခန်းစာများ၊ လမ်းညွှန်များ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များ။
လက်လီအရောင်းဆိုင်: MODELLERS WORLD PRODUCTS
Modellers World ကမ်းလှမ်းသည့်တရားဝင်စတိုးဆိုင်များနှင့်လက်ကားရောင်းသူများစာရင်း
ဘလော့ဂ်ကိုသွားလာရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုအောက်ပါလုပ်ကွက်များအရအုပ်စုဖွဲ့ထားသည်။
ပုံစံပေါ်တွင်အမှိုက်နှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောသဲလွန်စများနည်းစနစ်များကိုတင်ပြခြင်း အရုပ်၏ပုံပန်းသဏ္fromာန်မှသည်အဖြစ်မှန်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်နမူနာပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း။
အခြေခံမော်ဒယ်အလုပ်အကြောင်းအရာအားလုံး။ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပန်းချီခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးအရမော်ဒယ်ပုံစံကိုခြစ်ရာမှကြည့်ခြင်း။
မော်ဒယ်လ်ခေါင်းစဉ်များ - ကော်လံများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ မော်ဒယ်ဖြစ်ရပ်များမှအစီရင်ခံစာများ။ စစ်ရေးအကြောင်းအနည်းငယ်။
ကော်မတိုင်မီသေတ္တာများ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်မော်ဒယ်လ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ငါတို့လက်ျာဘက်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျနှင့်အချက်အထိငါတို့လက်ကိုအရာ။
Modelarski ကမ္ဘာမှာဘာအသစ်လဲ ၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများတွင်ပြောင်းလဲနေသောအရာများအကြောင်း၊ သတင်းနှင့်စျေးကွက်ကြေငြာချက်များအားလုံး။
ဤအပိုင်းတွင်၊ လုပ်သူနှင့် DIY နိူးထသူများအတွက်အသုံး ၀ င်သည့်အိမ်လုပ်ပစ္စည်းများ၊
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိရေးသားနေသည့်အရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်များမှာ -
ဆီ Wash ဤအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးဂုဏ်ယူစရာ ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ပိုလန်မော်ဒယ်လ်ရိုက်ကွင်းရှိ Mirosław Serba သည် မည်သူနည်း၊ ရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ အမြော်အမြင်ကြီးမားသော မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကြီးမားသော မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးနှင့် […]
စာရေးသူအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မီဒီယာတွင်သူ့ကိုလိုက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ pl / စည်းကမ်းချက် LINK: https://discord.gg/jxzq2rx စာမျက်နှာပေါ်တွင်စာမျက်နှာ: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOGSPOT အပေါ် BLOG: http://www.grotorderly.pl
ယနေ့ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင် Agtom လိုင်းရှိနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသည် 7TP tank ၏ IBG ၁:၃၅ တည်ဆောက်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည်၊ IBG တည်ငြိမ်မှုမှသတင်း။ Tomek သည်ဆေးသုတ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုတင်ပြခဲ့သည် wash လေ။ ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် [... ]
လူကြိုက်အများဆုံး entries တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းပေးသွင်းသူများအကြောင်းအများဆုံးဖတ်သည့်အရာများကိုစစ်ဆေးပါ။
ရေမြှုပ်ကူရှင်ချုပ် technique ကို - ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သော!
တန်ဖိုးရှိတယ်မဟုတ်လား။ - ပြန်လည်သုံးသပ်
သင့်မှာ Facebook အကောင့်ရှိပါသလား။ ငါတို့အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပါ မော်ဒယ်နှင့်ရာသီဥတုပရိတ်သတ်တွေ!
ရပ်ရွာထဲတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြရန်၊ လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်အကြံဥာဏ်တောင်းခံရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်လ်အသိအကျွမ်းများကိုပြုလုပ်ပါ၊ ဆွေးနွေးမှုများကိုလိုက်နာပါ။ မေးခွန်းမမေးသူသည်ဗဟုသုတမရရှိကြောင်းသတိရပါ။ ပြိုင်ပွဲများကိုဆုများနှင့်ကမ္ဘာ့မော်ဒယ်လ်ဖလားချန်ပီယံများကိုလည်းစီစဉ်သည်။
ငါ join ချင်တယ်
ငါသေချာပေါက်အကြံပြုပါသည်။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်၊ ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်လှပသောပန်းချီကားများကိုမော်ဒယ်လ်အဆင့်တိုင်းတွင်ပြုလုပ်သည်။
PL အတွက်အကောင်းဆုံး! ဝဘ်ဆိုက်၊ စျေးဆိုင်၊ ငါအုပ်စု, ပိုမိုမြင့်မားသောယဉ်ကျေးမှု၌ပါဝင်ရန်အကြံပြုပါသည်။
မော်ဒယ်လ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကလေးဘဝကတည်းကစားသုံးခဲ့သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသည်။ ၎င်းသည် Modelarski World ကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝါသနာကိုကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်အရည်အသွေးသည် ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးဆင်ခြေပေးစရာမလို။
© 2022 မော်ဒယ်လ်ကမ္ဘာ့ဖလား။ WordPress ကို သုံး၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည် အဓိကအကြောင်းအရာ